ကနေဒါနိုင်ငံတွင် COVID-19 စတုတ္ထလှိုင်းအားခံစားနေရကြောင်း ထိပ်တန်ဆရာဝန်ပြောကြား - Xinhua News Agency
အော့တဝ၊ သြဂုတ် ၁၃ ရက် (ဆင်ဟွာ)
နိုင်ငံအတွင်း COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲအမျိုးမျိုး ဆက်လက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိနေသောကြောင့် ကနေဒါနိုင်ငံအနေဖြင့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ စတုတ္ထလှိုင်းအားခံစားနေရကြောင်း ကနေဒါနိုင်ငံ၏ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရာရှိချုပ် Theresa Tam က သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင်ပြောကြားသည်။ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းမှစ၍ နိုင်ငံတွင်းကူးစက်မှုအရေအတွက်မှာ ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့ကြောင်း Tam က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၌ သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာသစ် ၂၁၃၈ ဦးရှိခဲ့ပြီး ယင်းနေ့အထိ COVID-19 ဖြင့်သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း ၂၆,၆၉၂ ဦး အပါအဝင် ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း ၁,၄၄၇,၄၃၉ ဦး အထိ ရောက်ရှိခဲ့ကြောင်း CTV အရ သိရသည်။
ကနေဒါနိုင်ငံ၏လူဦးရေ အထူထပ်ဆုံးဖြစ်သည့် အွန်တာရီယိုပြည်နယ် သည် သြဂုတ် ၁၂ ရက်တွင် ဗိုင်းရပ်ကူးစက်မှုအသစ် ၅၁၃ ဦးရှိပြီး ဇွန်လလယ်မှစ၍ ပထမဆုံးအကြိမ် ကူးစက်မှုပေါင်း ၅၀၀ ကျော် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းပြည်နယ်တွင် ဇွန် ၁၃ ရက်တွင် တစ်ရက်တည်းCOVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၅၀၀ ကျော်အားနောက်ဆုံးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုစဉ်က အတည်ပြုလူနာပေါင်း ၅၃၀ ဦးတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင် Alberta ပြည်နယ်တွင် အတည်ပြုလူနာသစ် ၅၅၀ဦးကိုတွေ့ခဲ့ပြီး British Columbia ပြည်နယ်တွင် အတည်ပြုလူနာသစ် ၅၁၃ဦးအား တွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ကျွန်မတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံအနှံ့ COVID-19 ကူးစက်မှုတိုးမြင့်လာခြင်းအား အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။ နောက်ဆုံးရရှိတဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံး အချက်အလက်ညွှန်းကိန်းများအရ ကနေဒါနိုင်ငံအနေနဲ့ စတုတ္ထလှိုင်း ရိုက်ခတ်မှုဒဏ်ကိုခံစားနေရပြီး ပိုပြီးပြင်းထန်လာဖို့ရှိပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
လက်ရှိတွင် ကနေဒါနိုင်ငံ၌ ရောဂါဖြစ်ပွါးနေသူ ၁၃,၀၀၀ ကျော်ရှိပြီး ဇူလိုင်လနှောင်းပိုင်းထက် အရေအတွက် နှစ်ဆပိုများလာကြောင်းသိရသည်။ နေ့စဉ် အတည်ပြုလူနာသစ် ၁၅၀၀ ရှိပြီး အများစုမှာ အသက် ၂၀ မှ ၃၉ နှစ်ကြားဖြစ်ကြောင်း Tam ကဆိုသည်။
“ကံကောင်းတာကတော့ သေဆုံးမှုအရေအတွက်က လျော့ကျနေပြီး သေနှုန်းက တစ်ရက်ကို ပျမ်းမျှ ၇ယောက်လောက် ပဲရှိပါတယ်’’ ဟု ၎င်းကပြောသည်။
စတုတ္ထလှိုင်းသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစနစ် သို့မဟုတ် ကျောင်းပြန်တက်မည့်အစီအစဉ်များကိုထိခိုက် စေကြောင်း၊ ကူးစက်မှုအားလျှော့ချရန် ကနေဒါနိုင်ငံသားများအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးပိုမိုထိုးနှံကြရန် ၎င်းကတိုက်တွန်းခဲ့သည်။ (Xinhua)
Canada suffering 4th wave of COVID-19, top doctor says
OTTAWA, Aug. 12 (Xinhua) — Canada is sufferingafourth wave of the COVID-19 pandemic as variants of the virus continue to spread in the country, said Canada’s Chief Public Health Officer Theresa Tam on Thursday.
Tam toldapress conference that the country’s national case count has takenaturn for the worse since late July.
To reduce the impact the fourth wave could have on the healthcare system or in jeopardizing back-to-school plans, she urged more Canadians to roll up their sleeve to get vaccinated. Enditem
ပဉ္စမအကြိမ်မြောက် CIIE အတွက် စီးပွားရေးပြခန်းပြသသူများအတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်း စတင်
ကနေဒါနိုင်ငံ၌ နောက်ထပ် ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘော်ဒါကျောင်းတစ်ခုတွင် အမှတ်အသားမရှိ သင်္ချိုင်းအုတ်ဂူ အများအပြား တွေ့ရှိ